We She Me: Iron Cross - Sydney 2010
| FLAGS: Ad
Anonymous - 7/18/10, 3:21 PM
I love IC but in singapore, the ic organizer just arrange anyhow.
Pyae Sone - 7/18/10, 8:48 PM
သွားချင်လိုက်တာ၊ လက်မှတ်ခက $100, $90, $80 ဆိုတော့ တော်တော် စဉ်းစားရဦးမယ်။ :(
ak - 7/19/10, 11:01 PM
only in Sydney ?
what about Perth ? :(
Anonymous - 7/20/10, 11:23 AM
IC is not coming to Perth?? =(
no sponsor in perth?? ='(
khin oo may - 7/22/10, 1:10 AM
Andy Myint - 7/22/10, 9:54 AM
မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်က အကူအညီတောင်းလို့ပါ။
:P - 7/22/10, 5:05 PM
အောက်ဆုံးက သမီးနဲ့ သားရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ဒီနေ့မှ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ..။ ကလေးဆိုဖာလေးကို လှည့်ပတ်က နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုပြောတာ။
Mila - 7/23/10, 4:34 AM
khin oo may - 7/24/10, 2:49 PM
သူလေးဘလော့လဲကောင်းတယ် စားစရာတွေ စုံလို့။
Anonymous - 7/25/10, 7:44 AM
ဇျေးကြီးတယ်နော် Pink တို့ Shakira တို့တောင် Europe မှာ ၄၅ယူရိုပဲပေးရတယ်..
Anonymous - 7/30/10, 10:12 PM
ရိတ်လှချည့် လားဗျာ။ ဒေါ်လာတစ်ရာတဲ့။ နိုင်ငံတကာ နာမည်ကြီး rock band တွေ Eric Clapton တို့ လို အဆိုကျော်ကြီးတွေ theatre တွေမှာ လာတီးလာဆိုတာတောင် အော်ဇီ ၉၀ ထဲပေးရတယ်။ ပရိသတ် ၁၀၀၀ ကျော်ဆိုတော့ ၁၀၀၀ x 100 = 100,000 သြဇီ တစ်သိန်းနီးပါး ပဲ။ အဆိုတော်တွေ တီးဝိုင်းဆရာတွေက ဟို အိမ်ထိုးထဲ့ ဒီအိမ်ထိုးထည့် ဆိုတော့ တည်းခို ခကလဲဖရီး။ လေယာဉ်ခပဲစိုက်ရမှာပဲ။ bankstown townhallကလဲ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ရပ်ကွက်ခန်းမပေါ့ဗျာ ။
ကိုလေးဖြူကို အသည်းခိုက်အောင်နားထောင်ချင်ပေမယ့် ၁၀၀နဲ့ တော့ ကြည့်နိုင်မယ်မထင်ဘူးဗျာ။ လှုတာလဲလှုတာပေါ့။ ဘယ်လောက်ပြန်လှုမယ်ဆိုတာ ကြေငြာပေးရင်ပိုကောင်းမလားပဲ
Anonymous - 7/31/10, 12:50 AM
Very expensive. Why?
Singing copy why need to payalot of money. Not shame?
hninhnin - 7/31/10, 6:19 AM
Hey!Andy Where have u been?On vacation?Longing for ur new post.
Anonymous - 8/13/10, 11:56 AM
နဂိုထဲကပါ့စ်ပို့ေုကာင့်မျက်နှာငယ်အထင်သေးခံနေရတဲ့ကြားထဲ.....သူတို့ ကတမှောင့်.....
nway - 8/13/10, 1:16 PM
written by moe, June 12, 2009
ခိုးကူးတာတော့ ဘယ်သူမှဘာမှ မတတ်နိုင် တော့ဘူး ထင်တာပဲဗျ။ ရောင်းတဲ့ သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ရဲတွေကို ဆက်ကြေးပေးပြီး ရောင်းနေရတာ။ ကျနော်လဲ ခိုးကူးပဲ ဝယ်တယ်ဗျာ။ အော် ငွေမှ မတတ်နိုင်တာ။ ဘယ်လိုခိုးကူးကူး အဆိုတော်တွေ (ဗမာပြည် အဆင့်အတန်း နဲ့ဆို) အများကြီး လူနေမှု မြင့်နေတာပဲ မဟုတ်လား။ နောက်ပြီး ကိုလေးဖြူ သီချင်းတွေ ကိုယ်တိုင်လဲ ကော်ပီပဲလေဗျာ။ တပုဒ်လုံး ကော်ပီရယ်၊ တစိတ်တပိုင်း ကော်ပီရယ် ဒါပဲရှိတာပဲဟာ။ မူရင်း အဆိုတော်တွေ သိရင်လဲ ကိုလေးဖြူကို တော်၂ ဒေါသထွက်မှာဗျို့။ smilies/grin.gif ဒါတွေ ပျောက်ချင်လား။ ပြည်သူ့ အစိုးရ ပေါ်လာအောင်ပဲ ဆုတောင်းတော့ဗျာ။ နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ ကိုယ်ပိုင် သံစဉ် စစ်စစ် ဆိုဖို့ ကြိုးစားပါတော့။
copy ကို စိတ်နာတယ်လား
written by tiger, June 10, 2009
copy ခွေရောင်းစားတဲ့ သူကို သွားကန်တယ်လား
IT ခောတ်မှာ ခင်ဗျားတို့copy ကို စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ စိတ်ပဲဒုက္ခဖြစ်နေမှာ အခုခောတ်က CDနဲ့ ကူးတဲ့ အဆင့် ကနိမ့် သွားပြီဗျ.. handset အချင်းချင်း bluetooth နဲ့ ကူးလို့ ရနေပြီဗျ.. ဟဲဟဲ..
written by လူမုန်း, June 10, 2009
ကိုလေးဖြူက ဒေါသထွက်သတဲ့လား.. ဘာဖြစ်လို့ထွက်ရတာပါလိမ့်.. အကျိုးအမြတ် နည်းသွားမှာစိုးလို့လား.. ဒါဆိုလည်း အနုပညာရှင်မလုပ်ပဲ ကုန်သည်လုပ်စားပါလား.. အခွေဗန်းကိုခြေထောက်နဲ့ ကန်သွားရိုးသာမှန်ရင် ခင်ဗျားရဲ့ အနာဂတ်အတွက် သတိသာထားပေတော့လို့ ပြောချင်ပါတယ်.. ခင်ဗျားဟာ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်လို့ ကျုပ်ထင်ထားတာ.. အခုလိုဆို ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုနေပြီ..
Aung - 8/13/10, 2:10 PM
hninhnin - 9/1/10, 12:20 AM
Hay Ko Andy, Where have u been ? How r u n ur family?Come on new post.
ဂျာမုန်းဒန် - 10/24/10, 11:22 PM